१७ वर्षीया किशोरीको बयान- त्यसपछि उनीहरु दुवैले पालैपालो ‘करणी’ गरे ! – Sanchar Patrika
July 18, 2020 410
विराटनगर : सा’मूहिक क’रणीमा परेकी एक किशोरी ग’र्भवती भएको घ’टना बाहिरिएको छ। मोरङको उर्लाबारीकी १७ वर्षीया किशोरीको पेटमा चार महिनाको ग”र्भ रहेको तथ्य खुलेको हो। उर्लाबारी नगरपालिका-५ का ३० वर्षीय प्रदीप खतिवडा र २१ वर्षीय भेषराज आचार्यले गत फागुन २७ गते किशोरीमाथि सा’मूहिक क’रणी गरेका मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले बताए।करणीबाट किशोरीको ‘गर्भ’ बसेको उनले जानकारी दिए। चकलेटमा खराब कुरा मि’साएर खुवाउँदै अ’र्धबे’होस बनाएर खतिवडा र आचार्यले किशोरीमाथि पा’लैपालो क’रणी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
Prev३० वटा सार्वजनिक भाडाका सवारी साधन समातिए
Nextहोसियार ! धेरै कागती सेवन गर्दा यस्ता हुनसक्छ
बच्चाको नाम राख्दा यस्ता नाम राख्नु भयो भने पछी बच्चालाइ एकदम नराम्रो असर पर्नेछ,जानी राखौ